MomentFeed: IziSombululo zeNtengiso zeSelfowni ekuhlaleni zoPhando kunye noLuntu | Martech Zone
Umama okondliweyo: IziSombululo zeNtengiso zeSelfowni ekuhlaleni kunye noPhando
NgoMgqibelo, Disemba 19, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ukuba ungumthengisi kwintengiso yokutyela, okanye ngaphezulu kwee-franchisees, okanye i-chain chain, awukwazi ukusebenza kuzo zonke iimarike kunye neendawo eziphakathi ukukhuthaza indawo nganye ngaphandle kwenkqubo ethile. Ibrand yakho ayibonakali kukhangelo lwasekhaya, imfama ekubandakanyeni abathengi, abanazixhobo zokwenza iintengiso ezifanelekileyo ekuhlaleni, kwaye bahlala bengalawuli ubukho beendaba zosasazo.
Yongeza umzamo kunye notshintsho kwindlela yokuziphatha yabathengi:
I-80% yabathengi ifuna iintengiso ezilungiselelwe indawo yazo
Kukho ngaphezulu kwe-1.7 yezigidigidi ezisebenzayo zeakhawunti zentlalo
I-90% yabathengi ithi uphononongo kwi-Intanethi luchaphazela izigqibo zokuthenga
I-88% yabasebenzisi basebenzisa ukukhangela okuhambayo ukuze bafumane iimveliso kunye neenkonzo ezikufutshane
Sisiphango esifanelekileyo. Ufuna ukuvezwa kwengingqi eyenzelwe umthengi wasekuhlaleni. Kwikhonkco elikhulu lesizwe kunye neefranchise brand, ukulahleka kwiziphumo zophando lwasekhaya bekudala kuyingxaki ngenxa yemali enkulu yendawo kunye nedatha yeshishini ekufuneka beyigcinile. Yongeza koku inyani yokuba imiqondiso yentlalo, njengokulinganisa kunye nokuphononongwa, inefuthe kwiziphumo zokukhangela, kunye nenani lolwazi ekufuneka lubekwe iliso kwishishini elinamakhulu okanye amawaka eendawo ezinokubonakala ngathi azinakwenzeka.
Ukusombulula oku, amashishini amaninzi amakhulu kunye neearhente zawo zosasazo, ezinje ngeApplebee, iJamba Juice, kunye neCofi Bean, bajike MomentFeed, ukwenza kube lula ukulawula nokwandisa idatha ephambili yevenkile ezinje ngeedilesi, iiyure zokusebenza, uphononongo kunye neefoto.
Iqonga le-MomentFeed lidibanisa iimveliso zeendawo ezininzi kunye nabathengi basekuhlaleni ekuhlaleni, ukuvumela amashishini ukuba ahambise ukuthengisa okufanelekileyo, okwenziwa kwindawo nganye kumawaka eendawo.
Iplatifomu yokuThengisa yaseKhaya eMomentFeed
Iqonga leMomentFeed liqukethe izisombululo zokukhangela kunye nokufumanisa, imithombo yeendaba zentlalo, imithombo yeendaba ehlawulelweyo kunye namava abathengi.
Ukukhangela kunye nokuFumanisa -I-MomentFeed yenza lonke unxibelelwano lwe-SEO lwasekhaya oluzenzekelayo ngokuzenzekelayo, ukwenza kunye nokugcina i-ecosystem ekhuthaza ukukhangela kwindawo yakho kwaye inike ukuthembeka kwiindawo zakho kuwo onke amaqonga.
Imithombo yeendaba ehlawulelweyo -Jika iphulo elinye lesizwe libe ngamaphulo awodwa kwindawo nganye ngokulula ngokucofa nje okuvumela ukuba usebenzise umxholo kwinethiwekhi ezahlukeneyo.
Ulawulo lwezeNtlalo -Ukushicilela ngaphakathi nohlelo kumajelo anjenge-Facebook, i-Instagram, i-Foursquare, i-Google + kunye ne-Twitter. Njengeefoto kwaye uphendule kubathengi kwisikali. Faka umxholo onamandla ukudala ukubaluleka kwendawo kunye nokwabelana ngomxholo.
Amava oMthengi -Ukulinganisa amanqaku kunye nokuphononongwa okuvela kuFacebook, kumacala amane, kuGoogle, kunye neYelp ukuvumela iimveliso ukuba zibeke iliso ngokufanelekileyo kwaye ziphendule kubathengi. Abasebenzisi banokukhupha uphononongo kwiindawo ezizodwa, bahlele ngokwamanqanaba eenkwenkwezi, kwaye baphendule ngokukodwa okanye kwiqela labaphawulayo.
I-MomentFeed ibhengeze ukuba iyaqhubela phambili namandla ayo njengokuvunywa I-Google Ibhizinisi Lwam Iqabane le-API. Ngale ntsebenziswano, iMomentFeed inokunceda ngakumbi iimveliso zelizwe ukuba ziphucule iziphumo zophando lwasekhaya kunye nemikhankaso yeNtengiso zikaGoogle ngokudibanisa uluhlu lweShishini lam kuGoogle kunye nezinto ezikhoyo zokwenza amandla e-geo.
I-Google Ibhizinisi Lwam (GMB) ivumela amashishini ukuba enze kwaye aphathe uluhlu lweshishini lasimahla kuthungelwano lukaGoogle, ke abathengi banokufumana ngokulula iindawo zokugcina xa besenza uphando kuKhangelo lukaGoogle nakwiMaphu. Xa zidityanisiwe nesakhono seMomentFeed esele sikhona sokwenza amandla, abathengi banokuqinisekisa ngokuchaneka okukhulu, ukungaguquguquki kunye nomxholo wasekhaya kumntu ngamnye, kwivenkile yendawo xa, umzekelo, abathengi bekhangela amagama anje nge "ikofu," "ivenkile yesandwich" okanye "iATM ekufutshane nam. ”
MomentFeed ikwakhona Iqabane le-Instagram, Amacala amane kwiQabane leShishini kunye nelungu lenkqubo ye-Facebook Marketing Partner (FMP)
tags: IkhonkcoFacebookuphononongo lwe facebookezineuphononongo lwamacala amaneobumiUGoogle ishishini lamUphononongo lukaGoogleGoogle +instagramukukhangela kwendawoimikhankaso yokukhangela yendawoyendawo seomzuzuindawo ezininziulawulo lweendaba ezentlaloTwitterYelpuphononongo lwe-yelp